सफलताको रहस्य (एकपटक पढ्नै पर्ने प्रेरणादायी कथा) - Lekhapadhi motivational story : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ३ श्रावण २०७७, शनिबार ११:५३ मा प्रकाशित
एक जना ठुलो सन्यासी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर बाहिर बस्नु हुन्थ्यो । ती सन्यासी त्यहाँ बसेर सधै जोर-जोरले चिच्याउदै “तपाई जे चाहनु हुन्छ त्यहि पाउनु हुन्छ” भनिराख्दथे ।
उक्त बाटो भएर जाने सबैले उनलाइ पागल हो सोच्ने गरेका थिए । ति सन्यासीका कुरा नसुने झैँ गर्दै मानिसहरू आफ्नो बाटो लाग्थे ।
एकदिन उक्त बाटो भएर दुइ जना युवक साथीहरू जाँदै गर्दा ती सन्यासी “तपाई जे चाहनु हुन्छ त्यहि पाउनु हुन्छ” भन्दै दाेहाेर्याएर चिच्याईरहेको सुने र उनकाे नजिक गए ।
नजिक गएर ति संयासिलाई सोधे – हजुरलाइ धेरै बेरदेखि “तपाई जे चाहनु हुन्छ त्यहि पाउनु हुन्छ” भनिरहेको सुने तर तपाई नजिक कोहि आउदैनन । के साच्चिकै तपाई चाहेको कुरा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
सन्यासीले भने- भन बाबु!! तिमिलाइ के चाहिएको छ ? म पुरा गर्न सक्छु ।
ती युवकले भने- म ठुलो ब्यापारी बन्न चाहन्छु । म सँग धेरै पैसा र राम्रो व्यापार होस भन्ने चाहना छ । के तपाई हाम्राे इच्छा पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ?
सन्यासीले भने “बिलकुल म तिमीहरूका इच्छा पुरा गर्न सक्छु ।” तीमीहरू हात अगाडि बढाउँ ।
उक्त दुवै युवक खुशी हुदै आफ्नो हात अगाडि बढाए ।
सन्यासीले भनेः म एक जनालाइ पैसा दिन्छु र अर्काेलाइ केही कुरा वताउनेछु भने ।
दुवै जना युवकहरू मध्ये एउटाले पैशा र अर्काेले केही सुझाव मात्र पाउने भयाे ।
सन्यासीले एक जनालाइ हातमा पैसाकाे चेक थमाए, उ गयाे ।
अब ति सन्यासीले पनि मन्त्र जप्दै आफ्नो बन्द रहेको हत्केला अर्काे युवकको हातमा राख्दै भने – बाबु, यो संसारकै अमुल्य धन हो, जसलाई “समय” भन्छन। यसलाई आफ्नो मुट्ठीमा राख अनि तिमीले चाहे जति पैसा प्राप्त गर्न सक्छौ । यसलाई आफ्नो हातबाट निस्कन नदिनु, समयलाई आफ्नो वसमा पार्न सक्यो भने सफल भइन्छ ।
त्यसपछि ती सन्यासीले अर्को बन्द हत्केला ति युवकको हातमा राख्दै भने- बाबु, यो संसारकै अर्को एकदम अमुल्य चिज हो, जुन तिमीले चाहेको व्यापार हो, जसलाई “धैर्यता” भनिन्छ । जब कुनै कार्यमा “समय” लगानी गरेर चाहेको प्रतिफल प्राप्त भएन भने “धैर्यता” गर्न सक्नु पर्छ । यदो तिमि धैर्य भएर अगाडी बढ्न सकेनौ भएन कुनै सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन ।
एउटा युवकले पैशा मात्र लगेर गयाे ब्यापार व्यवसाय गर्न भने अर्काे युवकले “समय” र “धैर्यता” लाइ गुरुमन्त्रको रुपमा सकारात्मक शिक्षा लिएर बिदा हुदै अठोट गर्यो कि अब उसले आफ्नो समय उचित कार्यमा लगाउने छ र अति धैर्यताका साथ अघि बढ्नेछ ।
केही वर्ष पछि जुन युवकले पैशा मात्र बाेकेर गएकाे थियाे त्याे फेरी पहिलाकाे जस्तै भयाे तर जुन युवकले ज्ञान लगेर गएकाे थियाे त्याे धेरै धनी मानिस भयाे ।
कथाको सार :
हरेक व्यक्ति आफु सफल बन्ने, ठुलो हुने सपना देखेको हुन्छ तर उक्त सपना साकार पार्न “समय” लाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। समयलाई व्यतित होइन समयलाई लगानी गर्न सिक्नुहोस । साथै हरेक कार्यमा धैर्यता आबश्यक पर्दछ । त्यसकारण यदि तपाईमा धैर्यता छैन भने सफल हुन सकिदैन ।
“समय” र “धैर्यता” सफलताका मुख्य सुत्र हुन। तपाईको समय सफल रहोस भन्ने कामना गर्दछु ।
by : D. Chand Thakuri